Psalm 9 und 10: Lobpreis und Aufforderung , Weltweite Kirche Gottes Schweiz (WKG)
Ny Salamo 9 sy 10 dia mifandray. Amin'ny teny hebreo, saika ny andininy tsirairay amin'izy roa ireo dia manomboka amin'ny litera manaraka ao amin'ny abidy hebreo. Ankoatr'izay, samy salama dia manasongadina ny fahafatesan'ny olombelona (9, 20; 10, 18) ary samy milaza ny hafa firenena (9, 5; 15; 17; 19-20; 10, 16). Ao amin'ny Septuagint, ireo salamo roa dia voatanisa ho iray.
Ao amin'ny Salamo faha-9, midera an'Andriamanitra i David noho ny nampisehoany ny fahamarinany teo amin'ny mpitsara amin'izao tontolo izao ary noho izy mpitsara marina sy mandrakizay izay ametrahan'ny olon-dratsy ny tsy fivadihany.
Ny talen'ny mpihira. Almuth Labben. Salamo. Avy amin'i David. Hidera an'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, holazaiko ny fahagagana rehetra nataonao. Ao aminao no tiako ny hifaly sy hifaly, tiako ny mihira ny anaranao, ry avo indrindra, fa ny fahavaloko lasa miala, hianjera ary ho faty eo anoloanao. Satria efa nitana ny zoko sy ny adiko ianao; mipetraka amin'ny seza fiandrianana ianao, mpitsara marina. Namely firenena maro ianao, ka nomenao ny ratsy fanahy, namafa ny anarany mandrakizay doria; vita ny fahavalo, potika mandrakizay; namotika tanàna ianao, nesorina ny fahatsiarovana azy. Ny Tompo mitoetra mandrakizay, efa nanangana ny seza fiandrianany ho fitsarana Izy. Ary Izy no hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, dia hitsara ny firenena amin'ny tsipika mahitsy Izy. Fa ny ampahorin'i Jehovah dia fetin'ny avo, fety avo amin'ny andro fahoriana. Matokia anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy nahafoy izay nitady anao aho, Tompo. Mihirà ho an'i Jehovah, mitoetra any Ziona, torio any amin'ny firenena izy. Satria ilay nanadihady ilay ra nalatsaka dia nahatsapa izany; tsy nanadino ny fitarainan'ny malahelo izy. Io salamo io dia naterin'i David ary voalaza fa hohiraina ho an'ny zanany taorian'ny firan'ny Die, araka ny vakiantsika amin'ny fandikan-teny hafa. Na izany aza, tsy fantatra mazava izay dikan'izany. Ao amin'ny andininy faha-1-3, dia nidera an'Andriamanitra fatratra i David, nilaza ny fahagagana nataony ary nifaly tao aminy fa faly sy midera azy. Fahagagana (ny teny hebreo midika fa zavatra niavaka) dia matetika ampiasaina amin'ny salamo rehefa miresaka momba ny asan'ny Tompo. Ny antony nidera an'i Davida dia voalaza ao amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny faha-6. Marina Andriamanitra (V. 4) amin'ny fijoroany ho an'i David. Niverina ny fahavalony (V. 4) ary hovonoina (V. 6) ary na ny firenena aza dia naringana ihany (V. 15; 17; 19-20). Ny famaritana toy izany dia mampiseho ny fihenany.Na dia ny anaran'ireo firenena mpanompo sampy aza dia ho tiana. Tsy hisy intsony ny fahatsiarovana sy ny fahatsiarovana azy ireo (V. 7). Mitranga izany rehetra izany satria araka ny filazan'i David dia Andriamanitra marina sy marina Andriamanitra ary milaza ny seza fiandrianany amin'ny fitsarana ny tany (V. 8f). Nampihatra io fahamarinana io sy fahamarinana koa i David tamin'ny olona niaritra tsy rariny. Izay nampahorina, tsy noraharahivina ary nohararaotin'olombelona dia atsanganin'ny mpitsara marina. Ny Tompo no fiarovana sy ampingany amin'ny fotoam-pahoriana. Koa satria ampiasaina indroa eo amin'ny andininy faha-9 ny teny hebreo fialokalofana, dia afaka mieritreritra ny hoe misy fiarovana sy fiarovana lehibe. Afaka matoky azy isika, amin'ny fahafantarantsika ny fiarovana sy ny fiadanany. Ny andininy dia mifarana amin'ny fampahatsiahivana ny olona, ​​indrindra fa ireo izay tsy hadinon'Andriamanitra (V. 13). Miangavy azy ireo hidera an'Andriamanitra (V2) ary lazao izay nataony ho azy (V. 12).
Vavaka: vonjy ho an'ny ory
Mamindrà fo amiko, Jehovah ô! Jereo ny fahoriako amin'ny fahavaloko, atsangano amin'ny vavahadin'ny fahafatesana aho, mba hilazako ny fiderana rehetra anao eo am-bavahadin'i Ziona zanakavavy fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Nilentika tao an-davaka nataon'izy ireo ny firenena; ny tongony ihany dia tratra ao anatin'ny harato nafeniny. Jehovah efa naneho ny tenany, nanao fitsarana; ny ratsy fanahy efa voafandrika tamin'ny asan'ny tanany. Higgajon. Hiverina any amin'ny fiainan-tsi-hita ny ratsy fanahy, ny firenena rehetra manadino an'Andriamanitra. Satria tsy hohadino mandrakizay ny mahantra, dia ho very mandrakizay ny fanantenana tsy azo ihodivirana. Mitsangàna, ry Tompo, fa tsy manana hery ny olona! Enga anie hotsaraina eo anoloanao ny firenena! Matokia azy ireo, Tompo ô! Enga anie ho fantatry ny firenena fa olombelona izy ireo!
Miaraka amin'ny fahalalana ny famonjen'Andriamanitra dia niantso an'Andriamanitra hiresaka aminy amin'ny fahoriany i David ary hanome azy antony hiderana. Nangataka tamin'Andriamanitra izy nahatsikaritra fa enjehin'ny fahavalony izy (V. 14). Manoloana ny fahafatesana dia niantso an'Andriamanitra hovonjeny tamin'ny vavahadin'ny fahafatesana izy (V. 14; jereo. Joba 38, 17; Salamo 107, 18, Isaia 38, 10). Raha voavonjy izy, dia hotateriny amin'ny olona rehetra koa ny fahalehibiazany sy ny voninahiny ary ho faly eo am-bavahadin'i Ziona (V. 15).
Ny vavaka nataon'i David dia nampahery tamin'ny fahatokiany lalina an'Andriamanitra. Ao amin'ny andininy 16-18, i David dia niresaka ny antson'Andriamanitra handrava ny olona diso. Ny andininy 16 dia azo inoana fa nosoratana teo am-piandrasana ny handringanana ny fahavalo. Raha teo dia niandry ny fahavalo hahalatsaka ny ao anaty lavaka avy i Davida. Fa ny fahamarinan'ny Tompo dia fantatra na aiza na aiza, satria hianjera amin'ny loza ny ratsy naparitaky ny tsy marina. Ny hiafaran'ny ratsy fanahy dia mifanohitra amin'ny an'ny malahelo (V. 18-19). Tsy ho very ny fanantenanao, fa ho tanteraka. Ireo izay mandà sy tsy miraharaha an’Andriamanitra dia tsy manana fanantenana. Nifarana tamin'ny vavaka ny Salamo faha-9 mba hijoroan'Andriamanitra hanjaka sy hanjaka ary hanjaka. Ny fitsarana toy izany dia mahatonga ny Jentilisa hahatsapa fa olombelona ary tsy afaka manakana ireo izay matoky an'Andriamanitra.
Ao amin'ity salamo ity, nanohy ny fivavahany avy ao amin'ny Salamo faha-9 i David tamin'ny fangatahana an'Andriamanitra tsy hiandry ny fitsarana azy intsony. Notantarainy ny hery be tafinan'ny ratsy fanahy amin'Andriamanitra sy amin'ny olona, ​​ary avy eo dia niady tamin'Andriamanitra mba hijoro sy hamaly faty ny mahantra amin'ny fandringanana ny ratsy fanahy.
Famaritana ny olon-dratsy
Nahoana, Tompo ô, mijanona lavitra ianao, afenina amin'ny andro fahoriana? Ny ratsy fanahy dia manenjika mafy ny fireharehana. Voasambotra izy ireo amin'ny fanafihana nofitain'izy ireo. Fa ny ratsy fanahy dia mirehareha ny fanirian'ny fanahiny; ary ny mpiteny ratsy dia manala baraka an'i Jehovah. Ny ratsy fanahy dia mieritreritra hoe: tsy hanadihady izy. Tsy andriamanitra izany! ny fisainany rehetra. Mahomby hatrany ny lalany. Lehibe ny lovanao, lavitra azy; ny fahavalony rehetra dia nokapohiny ireo. Hoy izy tao am-pony: «Tsy hiantosa aho, tsy ho diso fanantenana amin'ny firaisana ara-nofo. Feno ozona ny vavany, feno fitaka sy fampahoriana; eo ambanin'ny lelany ny fahoriana sy ny loza. Voatazona ao an-tokotaniny izy, rehefa manafina ny tsy manan-tsiny; Ny masony nijery ny mahantra. Mierona toy ny liona ao anaty kirihitra izy; manindry mandry izy; misambotra ny tsy fadiranovana izy amin'ny fisintonana azy ho ao anatin'ny haratony. Izy no mamely, dera [midina]; ary ny malahelo lavon'ny heriny. Hoy izy anakampo: Andriamanitra nanadino, nanafina ny tavany, tsy hahita mandrakizay!
Ny ampahany voalohany amin'ity salamo ity dia famaritana ny herin'ny ratsy fanahy tsy misy fetsy. Tany am-piandohana dia nitaraina ny mpitantsoratra (angamba David) miaraka amin'Andriamanitra, izay toa tsy miraharaha ny filan'ny mahantra. Nanontany izy hoe maninona no tsy toa an’Andriamani-dratsy toa izao tsy rariny izao. Ny fanontaniana hoe maninona dia fanehoana mazava ny fahatsapan'ny olona ampahorina rehefa miantso an'Andriamanitra izy. Aza hadino ny momba an'io fifandraisan'i Davida sy Andriamanitra marina io.
Avy eo ao amin'ny andininy 2-7 dia manazava ny toetran'ny fahavalo i David. Feno avonavona, fanahy avo ary fitsiriritana (V. 2) ny ratsy fanahy dia mamely ny malemy ary miteny an'Andriamanitra amin'ny teny tsy fantatra. Ny olona ratsy fanahy dia feno avonavona sy malala-tanana ary tsy manome toerana ho an'Andriamanitra sy ny didiny. Ny olona toy izany dia mahazo antoka fa tsy hiala amin'ny faharatsiany. Mino izy fa afaka manohy manao izany tsy misy sakana (V. 5) ary tsy misy zava-tsarotra (V. 6). Ny teniny dia diso sy manimba ary mampiteraka fahasahiranana sy faharatsiana (V. 7).
Ao amin'ny andininy 8-11, i David dia namariparitra ny olon-dratsy raha ny olona misandoka mangingina ary manafika ireo niharam-piarovana tsy ho voaro toy ny liona, misintona azy ireo toy ny mpanarato ao amin'ny tranon'izy ireo. Ireo sarin'ny liona sy mpanjono ireo dia mampatsiahy ny kajy ny olona hiandry ny hanafika olona iray fotsiny. Ireo olon-dratsy dia matin'ny olon-dratsy ary satria tsy tonga hamonjy avy hatrany Andriamanitra, dia resy lahatra ireo olon-dratsy fa tsy miahy na tsy mikarakara azy Andriamanitra.
Mitsangàna, ry Tompo! Andriamanitra manandratra ny tananao! Aza adino ny manjo mafy! Maninona Andriamanitra tsy manam-petsy manome fahafaham-po an'Andriamanitra, ka manao anakampo hoe: "Tsy hitady hevitra ianao?" Hitanareo izany, satria mijery ny fisasarana sy ny alahelo ianao, hanala izany ao an-tananao. Nahafahanareo ny mahantra sy ny kamboty; ianao no mpanampy. Tapatapaka ny sandrin'ny ratsy fanahy! Valio ny tsy fahatanterahany izay tsy ho hitanao akory! Jehovah dia Mpanjaka mandrakizay doria; ireo firenena dia efa nanjavona tamin'ny fireneny. Ianao dia efa henonao ny fanirian'ny mpandefitra; mampatanjaka ny fony ianao, avelao hihaino tsara ny sofinao, mba hanaovanao ny kamboty sy ny ampahorina, fa tsy hisy olona hihorohoro amin'ny tany intsony.
Tamin'ny vavaka tamim-pahatsorana natao ho valifaty sy valifaty, niantso an'i Andriamanitra Andriamanitra hitsangana (9, 20) sy hanampy ny tsy manan-kialofana (10, 9). Ny antony iray amin'ity fangatahana ity dia ny tsy tokony havela hanao tsinontsinona an'Andriamanitra sy hino fa afaka miala amin'izany izy ireo. Tokony hafindra ny valin'ny Tompo mba hamaly satria ny malemy dia matoky an'Andriamanitra hahita ny filàny sy ny fanaintainany ary ho mpanampy azy ireo (V. 14). Ny mpanao salamo dia manontany manokana momba ny fandringanana ny tsy manompo (V. 15). Eto dia tena feno sary koa ny filazalazana: tapaho ny sandrinao mba tsy hanananao hery intsony. Raha tena manasazy ny olon-dratsy tokoa Andriamanitra amin'ny fomba toy izany, dia tsy maintsy mamaly fanontaniana amin'ny ataony izy ireo. Tsy ho afaka hilaza intsony i Davida avy eo fa tsy miahy ny ampahorina sy manjaka Andriamanitra.
Ao amin'ny andininy 16-18, ny salamo dia mifarana amin'ny fahatokisan'i Davida fa Andriamanitra dia nihaino azy tamin'ny vavaka nataony. Toy ny ao amin'ny Salamo 9, manazava ny fitondran'Andriamanitra izy, na eo aza ny toe-javatra rehetra (V. 9, 7). Izay manohitra ny lalany dia ho very (V. 9, 3; 9, 5; 9, 15). Natoky i Davida fa hihaino Andriamanitra ary hitsangana ny fitalahoana sy ny antsoantson'ny olona ampahorina, hany ka tsy olona ratsy fanahy izay olombelona (9, 20) tsy manan-kery azy ireo intsony.
Napetrak'i Davida teo anatrehan'Andriamanitra ny fony. Tsy matahotra ny hilaza aminy ny ahiahiny sy ny fisalasalany izy, na dia ny fisalasalany mikasika an’Andriamanitra aza. Rehefa manao izany izy dia ampahatsiahivina fa mahatoky sy manao ny rariny Andriamanitra ary ny fotoana tsy hisehoan'Andriamanitra dia misy vetivety. Zava-poana ve ilay izy? Hekena Andriamanitra fa iza izy: izay miahy, manohana ny tsy misy ary miteny ny ratsy ho an'ny ratsy izy.
Tena fitahiana lehibe ny tanterahana ireo vavaka ireo satria afaka miaina fihetseham-po toy izany koa isika. Manampy antsika hiresaka azy ireo ny salamo ary hiatrika azy ireo. Manampy antsika izy ireo hitadidy an'Andriamanitra mahatoky indray. Miderà azy ary ento eo anatrehany ny faniriany sy ny faniriany.